“ကျွန်မတို့ အားလုံး မျက်စိမမှိတ် ခင်မှာ ကျွန်မတို့ နိုင်ငံ ငြိမ်းချမ်းရေး ရတာကို မြင်သွား ချင်ပါတယ်” – Let Pan Daily
ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံ (၂၁) ရာစုပင်လုံ စတုတ္ထအစည်းအဝေးမှ နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ အဖွင့်မိန့်ခွန်း ပြောကြားချက်ကို ကောက်နုတ်တင်ပြသည် .. လက်နက်ကို အားကိုးမှ၊ အင်အားသုံး မှ ထိရောက်မှု ရှိမယ်၊ အရာဝင်မယ်ဆိုတဲ့ ဓလေ့ဆိုးကို ဖြတ်တောက်ပစ်ဖို့ လို …. သေနတ်သံတွေ၊ ဗုံးသံတွေ ဒီနေ့ တိတ်သွားပေမဲ့ မနက်ဖြန် ပြန် ထွက်လာနိုင် … လက်နက်ကို အားကိုးမှ၊ အင်အားသုံး မှ ထိရောက်မှုရှိမယ်၊ အရာဝင်မယ်ဆိုတဲ့ ဓလေ့ဆိုးနဲ့ အရင်းခံစိတ်ဓာတ်ကို ဖယ်ရှားပစ်နိုင်ဖို့ လို .. အပေးအယူ၊ အလျှော့အတင်း နိုင်ငံရေး ယဉ်ကျေးမှု တည်ဆောက်ပြီး ဗီဇဆိုး၊ ဓလေ့ဆိုးကို ဖယ်ရှားရမယ်
အပေးအယူ၊ အလျှော့အတင်းနဲ့ ကျင့်သား ရအောင် ထပ်ဖန်တလဲလဲ လုပ်ရမယ် … အပေးအယူလုပ်မှု လျော့နည်းတာ သမိုင်း တစ်လျှောက်လုံး မြင်တွေ့ရမှာပါ …အပေးအယူ၊ အလျှော့အတင်းလုပ်တဲ့ အကျိုး တရားတွေကို သိမြင်လာလေလေ ယုံကြည်မှု ပိုရှိလာလေလေ ဖြစ် .. ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဟာ စီးပွားရေး အခြေအနေ၊ ကပ်ရောဂါအခြေအနေ၊ ကိုဗစ်အလွန် နေထိုင်မှုပုံစံအသစ် အခြေအနေ၊ အားပြိုင်မှုမြင့်မားလာတဲ့ နိုင်ငံတကာအခြေအနေ၊ ပထဝီနိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့ ဆက်စပ်ချိတ်ဆက်နေတာကို သတိပြုရမယ်
တပ်မတော်ရော၊ NCA လက်မှတ်ရေးထိုး ထားတဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေရော၊ NCA လက်မှတ်မထိုးထားတဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေရော ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲရဲ့အခွင့်အရေးတွေကို မိမိရရ ဆုပ်ကိုင်ကြဖို့ တိုက်တွန်းပြောကြားလို …မြန်မာနိုင်ငံဟာ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခရဲ့ ဆိုးကျိုး ကို ကျောကော့အောင် ခံခဲ့ရ .. ကမ္ဘာ့အရှည်ကြာဆုံး ပြည်တွင်းစစ်လို့ တင်စားခံခဲ့ရ
ဘယ်လောက်ကြာအောင် အနာဂတ်တွေ အဓိပ္ပာယ်မဲ့နေကြဦးမှာလဲ .. နှစ်ပေါင်း ၇၀ ကျော်ကာလအတွင်း ငွေကြေးထရီလျံချီ ဆုံးရှုံးခဲ့၊ ပြည်ထောင်စုအနာဂတ်၊ ပြည်ထောင်စုထဲက သားသမီးတွေရဲ့ဘဝ မြောက်များစွာ ပေးဆပ်ခဲ့ရ .. ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်သူ ဖြစ်လာဖို့ သမိုင်းက အခွင့်အရေးပေးလာ.. အဆိုးသံသရာကို မိုက်မိုက်မဲမဲ လျှောက်လှမ်းကြမှာလား၊ ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းသစ်ကို လျှောက်လှမ်းကြမှာလား .. လမ်းနှစ်သွယ်ထဲက ဘယ်လမ်းကို လျှောက်မလဲ၊ ဘယ်လမ်းကို လိုက်မလဲ။ ပြည်ထောင်စုရဲ့အနာဂတ်ကို အဆုံးအဖြတ်ပေးမယ့် လမ်းဆုံလမ်းခွမှာ ရောက်နေပြီ .. မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေရဲ့ မျက်နှာကို ပြန်မြင်ယောင်ကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်
“ကြှနျမတို့ အားလုံး မကျြစိမမှိတျ ခငျမှာ ကြှနျမတို့ နိုငျငံ ငွိမျးခမျြးရေး ရတာကို မွငျသှား ခငျြပါတယျ”
ပွညျထောငျစုငွိမျးခမျြးရေး ညီလာခံ (၂၁) ရာစုပငျလုံ စတုတ်ထအစညျးအဝေးမှ နိုငျငံတျော အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ ၏ အဖှငျ့မိနျ့ခှနျး ပွောကွားခကျြကို ကောကျနုတျတငျပွသညျ
လကျနကျကို အားကိုးမှ၊ အငျအားသုံး မှ ထိရောကျမှု ရှိမယျ၊ အရာဝငျမယျဆိုတဲ့ ဓလဆေို့းကို ဖွတျတောကျပဈဖို့ လို …. သနေတျသံတှေ၊ ဗုံးသံတှေ ဒီနေ့ တိတျသှားပမေဲ့ မနကျဖွနျ ပွနျ ထှကျလာနိုငျ … လကျနကျကို အားကိုးမှ၊ အငျအားသုံး မှ ထိရောကျမှုရှိမယျ၊ အရာဝငျမယျဆိုတဲ့ ဓလဆေို့းနဲ့ အရငျးခံစိတျဓာတျကို ဖယျရှားပဈနိုငျဖို့ လို .. အပေးအယူ၊ အလြှော့အတငျး နိုငျငံရေး ယဉျကြေးမှု တညျဆောကျပွီး ဗီဇဆိုး၊ ဓလဆေို့းကို ဖယျရှားရမယျ
အပေးအယူ၊ အလြှော့အတငျးနဲ့ ကငျြ့သား ရအောငျ ထပျဖနျတလဲလဲ လုပျရမယျ … အပေးအယူလုပျမှု လြော့နညျးတာ သမိုငျး တဈလြှောကျလုံး မွငျတှရေ့မှာပါ …အပေးအယူ၊ အလြှော့အတငျးလုပျတဲ့ အကြိုး တရားတှကေို သိမွငျလာလလေေ ယုံကွညျမှု ပိုရှိလာလလေေ ဖွဈ .. ငွိမျးခမျြးရေးလုပျငနျးစဉျဟာ စီးပှားရေး အခွအေနေ၊ ကပျရောဂါအခွအေနေ၊ ကိုဗဈအလှနျ နထေိုငျမှုပုံစံအသဈ အခွအေနေ၊ အားပွိုငျမှုမွငျ့မားလာတဲ့ နိုငျငံတကာအခွအေနေ၊ ပထဝီနိုငျငံရေးအခွအေနနေဲ့ ဆကျစပျခြိတျဆကျနတောကို သတိပွုရမယျ
တပျမတျောရော၊ NCA လကျမှတျရေးထိုး ထားတဲ့ တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျအဖှဲ့အစညျးတှရေော၊ NCA လကျမှတျမထိုးထားတဲ့ တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျအဖှဲ့အစညျးတှရေော ငွိမျးခမျြးရေးဆှေးနှေးပှဲရဲ့အခှငျ့အရေးတှကေို မိမိရရ ဆုပျကိုငျကွဖို့ တိုကျတှနျးပွောကွားလို …မွနျမာနိုငျငံဟာ လကျနကျကိုငျပဋိပက်ခရဲ့ ဆိုးကြိုး ကို ကြောကော့အောငျ ခံခဲ့ရ .. ကမ်ဘာ့အရှညျကွာဆုံး ပွညျတှငျးစဈလို့ တငျစားခံခဲ့ရ
ဘယျလောကျကွာအောငျ အနာဂတျတှေ အဓိပ်ပာယျမဲ့နကွေဦးမှာလဲ .. နှဈပေါငျး ၇၀ ကြျောကာလအတှငျး ငှကွေေးထရီလြံခြီ ဆုံးရှုံးခဲ့၊ ပွညျထောငျစုအနာဂတျ၊ ပွညျထောငျစုထဲက သားသမီးတှရေဲ့ဘဝ မွောကျမြားစှာ ပေးဆပျခဲ့ရ .. ငွိမျးခမျြးရေးတညျဆောကျသူ ဖွဈလာဖို့ သမိုငျးက အခှငျ့အရေးပေးလာ.. အဆိုးသံသရာကို မိုကျမိုကျမဲမဲ လြှောကျလှမျးကွမှာလား၊ ငွိမျးခမျြးရေးလမျးသဈကို လြှောကျလှမျးကွမှာလား
လမျးနှဈသှယျထဲက ဘယျလမျးကို လြှောကျမလဲ၊ ဘယျလမျးကို လိုကျမလဲ။ ပွညျထောငျစုရဲ့အနာဂတျကို အဆုံးအဖွတျပေးမယျ့ လမျးဆုံလမျးခှမှာ ရောကျနပွေီ .. မြိုးဆကျသဈလူငယျတှရေဲ့ မကျြနှာကို ပွနျမွငျယောငျကွဖို့ တိုကျတှနျးလိုပါတယျ
နိုင်ငံခြား ကားထဲက အတိုင်း သေနတ်အောက် ဆိုက် (၃)ချက် ဖောက် လိုက်တာ (၃) ဦးဒဏ်ရပြီး (၁)ဦးသေးဆုံးမှုဖြစ်ပွား